ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့သာ ဦးစားပေး စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဥက္ကဌ ပြောကြား ~ Myanmar Online News
ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့သာ ဦးစားပေး စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဥက္ကဌ ပြောကြား
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေးက ကိုဗစ်ကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့သင့်မသင့် သတင်းဌာနတစ်ခုကလာမေးလာခဲ့မှုအပေါ် ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့သာ ဦးစားပေး စဉ်းစားသင့်ကြောင်း သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ အခုလို့ ဖော်ပြလာခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
"ကျနော်မြင်တာကတော့ ဆုံးဖြတ်တာက အာဏာပိုင်တွေကိစ္စ၊ သို့သော် - ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ အစိုးရပိုင်မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ကော်မရှင်ပိုင်မဟုတ်၊ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကလဲ အရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်စနေပြီ၊ ကူးစက်ရောဂါအတွက်ဘယ်လိုအာမခံချက်နဲ့ ပြည်သူကိုမဲပေးခိုင်းမှာလဲ တံဆိပ်တုံးတစ်ယောက်ထုပြီးရင်
စက္ကန့် ၂၀ ကြာ ဆပ်ပြာနဲ့ပြန်ဆေးပေးမှာလား တံဆိပ်တုံးတွေ ရာချီပြီးထားပေးမလား ဒါမှမဟုတ် လက်အိတ်နဲ့ကိုင်ရမှာလား အစိုးရကလက်အိတ်ပေးမလား voter ကကိုယ့်လက်အိတ်နဲ့ကိုယ်လာရမလား? ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်အတိုင်းဆိုရင် မဲရုံတစ်ရုံမှာတစ်နေကုန်ပေးရင်တောင် လူ ၅၀၀ ပေးနိုင်ဖို့မလွယ် အောင်မြင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါ့မလား? ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့သာ ဦးစားပေး စဉ်းစားသင့်ကြောင်း"
၎င်း၏ အမြင်ကိုမေးလို့ ပြောပြခဲ့တာပါ ။
ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ကျင်းပရန် ၇၂ ရက်သာ လိုတော့ကြောင်း သိရပါသည်။
crd-U Than Htay #Myanmar_Online_News #ဦးသန်ဌေး #ရွေးကောက်ပွဲ
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေးက ကိုဗစ်ကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့သင့်မသင့် သတင်းဌာနတစ်ခုကလာမေးလာခဲ့မှုအပေါ် ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့သာ ဦးစားပေး စဉ်းစားသင့်ကြောင်း သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ အခုလို့ ဖော်ပြလာခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။